Huawei Y6P: Anyị na-enyocha "ọnụ ala" kachasị ọhụrụ site na Huawei | Akụkọ akụrụngwa
Huawei Y6P: Anyị na-enyocha ndị ọhụrụ «ala na-eri» si Huawei
Huawei gara n'ihu na kalenda mbido ọrụ ya maka afọ a 2020, ọ bụ ezie na anyị hụrụ Huawei P40 Pro n'oge na-adịbeghị anya nke ị nwere nyocha na weebụsaịtị anyị, ugbu a ọ na-egwu egwu dị iche iche, ọ bụkwa na Huawei dị ka nnukwu ekwentị emeputa na Ọ bụ ụdị ngwaahịa dị iche iche niile sitere na ọkwa kachasị elu na ntinye ntinye. Ọnọdụ a "ọnụ ala dị ala" bụ ihe na-ewetara anyị taa, Anyị ga-eme nyocha miri emi nke Huawei Y6P ọhụrụ, otu n'ime ọnụ ala dị ọnụ ala karịa nke Huawei nwere na katalọgụ ya.
Dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị na-eso nyocha nke vidiyo a na enweghị igbe, ule nke igwefoto na otutu ihe na-adọrọ mmasị, yabụ anyị na-akpọ gị oku ka ị buru ụzọ gaa vidiyo ahụ wee rite uru na nke a iji mara ọrụ ya n'ụzọ miri emi ma were ohere ịdenye aha na chanel YouTube anyị.
3 Multimedia na Njikọta ngalaba
4 Igwefoto na nnwere onwe
5 Ọnụahịa na mwepụta
Huawei Y6P a bụ nke e ji plastik mee, ọbụna azụ ya, nke nwere ezigbo ihe ọ ,ụ glassụ iko, bụ nke plastik na, dị ka ọ dị na mbụ, ọ na-adọta mkpịsị aka nke ukwuu. O sina dị, Nke a plastic na-enyere aka na-ebu ya arọ ebe anyị nwere batrị na-dịtụ ibu karịa nkịtị. Maka akụkụ ya, anyị nwere usoro ndị nwere ọnụahịa na-echeba ma ọnụahịa ya na panel nke 6,3-inch.
Size: 159,07 x 74,06 x 9,04 mm
N'aka ọ dabara nke ọma, Anyị nwere ụdị ọkwa dobe maka igwefoto dị n'ihu yana etiti na ala nke akpọrọ nke ndị ọzọ. Na azụ anyị nwere ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na bọọdụ bọtịnụ dum dị n'akụkụ aka nri nke ngwaọrụ ahụ. A tọhapụrụ ya na-acha odo odo, nwa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke anyị nwalere.
Anyị na-amalite site na ndabere na nke a Huawei Y6P Ọ bụ ngwaọrụ ntinye, nke a pụtara na anyị ga-enwe ngwaike zuru ezu maka ọrụ kwa ụbọchị mana ịhazigharị ihe dị ka o kwere mee na ọnụahịa dị ala. Ya mere, n'agbanyeghị na-agba egwu nke nkọwa na mba ndị ọzọ Huawei ke Spain opted maka processor nke Mediatek, MT6762R dị ala yana IMG GE8320 650MHz GPU, ha niile so 3GB nke Ram na 64GB nchekwa maka ụdị niile na-enweghị ike mgbanwe.
Anyị ahụmahụ na-ewere n'ime akaụntụ na anyị nwere ọhụrụ dakọtara version of EMUI 10.1 esonyere Android 10 na ụdị AOSP ya arụmọrụ dị mma maka mgbasa ozi mmekọrịta oge ochie, ozi ngwa ngwa, njikwa ozi, na ọrụ nchọgharị. O doro anya na ọ na-ada ada ma ọ bụrụ na anyị gbalịa igwu ya, dịka ọmụmaatụ Asphalt 9. Na nkenke, anyị ga-edo anya na anyị na-eche ọdụ ụgbọ ala bụ isi iji rụọ ọrụ kwa ụbọchị mana nke anyị na-agaghị achọ nke ukwuu n'ihe ọ bụla n'ozuzu akụkụ. Dị ka uru, anyị nwere n'ụzọ zuru ezu ẹdude oriri batrị.
Na ngalaba multimedia anyị nwere ogwe aka 6,3 inch IPS LCD nke na-enweta ezigbo pasent nke ihuenyo mana nwere HD + mkpebi de Pixel 1600 x 720. N'agbanyeghị na enwere ezigbo mma na njupụta zuru oke dị ka a pụrụ ịhụ na vidiyo ahụ, anyị na-ahụ njupụta pixel na-adịghị mma ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche akụkụ ahụ, nke a dịkwa m ka otu n'ime isi adịghị ike nke ọdụ. Banyere ụda ahụ, akụkụ ala nwere ọkà okwu kpochapụwo n'ime usoro ntinye ya na ụda dị oke elu mana enweghị etiti na bass.
A na-ahapụ njikọta na tray DualSIM yana Bluetooth 5.0 na njikọ NFC. Ma WiFi naanị anyị nwere njikọ na netwọk 2,4 GHz ihe m na-agwụchabeghị, ọkachasị ebe netwọkụ 5 GHz na-enye ọsọ karịa ma bụrụ ndị ama ama na Spen. O doro anya na anyị nwere ndakọrịta netwọk 4G LTE ya mere, anyi agaghi echefu ihe obula na nkebi a, na-echefughi ndi ozo nke njikọ Huawei (Huawei Beam ... wdg) yana eziokwu na microUSB na ala bu OTG, anyị nwere ike ijikọ mpụga nchekwa ya.
Igwefoto na nnwere onwe
Maka igwefoto azụ anyị nwere ihe mmetụta atọ: 13 MP (f / 1.8) maka ihe mmetụta ọdịnala, 5MP (f / 2.2) maka Wide Angle sensor na ihe mmetụta 2MP (f / 2.4) nke atọ Ezubere iji melite nsonaazụ nke foto na nsonaazụ eserese. Maka igwefoto n'ihu anyị nwere 8MP (f / 2.0). Ihe anyị na-enweghị bụ nyocha ngwa anya na igwefoto, yabụ vidiyo bụ ebe ọ kacha ata ahụhụ. Anyị enweghị "ọnọdụ abalị" yabụ igwefoto na-ata ahụhụ nke ukwuu mgbe ọnọdụ ọkụ na-ada, mana nsonaazụ ya na ntụgharị dị iche na-atọ ụtọ mgbe ị na-atụle ọnụahịa ahụ.
Banyere obodo kwụụrụ anyị nwere nnukwu 5.000 mAh batrị na iburu n'uche njedebe nke ngwaike emeela ka anyị nọrọ ụbọchị abụọ zuru ezu (na ntakịrị ihe) na ule. Anyị nwere 10W chaja (ihe ruru awa 2 nke ụgwọ) esịne ke ngwugwu anyị nwere ike iji microUSB dị ka batrị dị na mpụga, ya bụ, ịkwanye ngwaọrụ ndị ọzọ. O doro anya na anyị enweghị eriri igwe ebe ọ bụ na ejiri plastik mee ngwaọrụ ahụ. O doro anya na batrị bụ otu n’ime isi ihe kachasị ike nke Huawei Y6P a ọ bụkwa ọkọlọtọ na mbipụta ya ọ bụla n’ezie.
Huawei Y6P dị na ahịa site na echi 25 maka Mee na Storelọ ahịa Huawei na isi ihe ọrịre site na € 149na nke ọ bụla nke dị na agba. N'oge na-adịghị anya ọ ga-adịkwa na isi okwu nke ire ere dịka Amazon, El Corte Inglés ma ọ bụ ụlọ ahịa anụ ahụ nke Huawei. Obi abụọ adịghị ya na ọnụahịa ntinye na ọnụahịa dị nke isi ihe na-adịghị mma na-enweghị ike ịnweta Ọrụ Google nwa afọ, Ihe ihere na n'ihi ihe ndi ozo na Huawei n'onwe ya, anyi na-aga n'ihu inwe oke na usoro nke ngwanrọ.
Ọnụahịa ọdịnaya na atụmatụ ndị na-adọrọ mmasị
Ihe a mara mma na batrị ya buru ibu
Igwefoto dị iche iche na-atụle ọnụahịa ọnụahịa
Anyị enweghị Ọrụ Google
Aghọtaghị m ihe kpatara ha ji etinye microUSB
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Huawei Y6P: Anyị na-enyocha ndị ọhụrụ «ala na-eri» si Huawei
Etu esi eji aka Google Lens nyefee ederede aka gi na komputa gi
Otu esi belata mmetụta nke coronavirus na ụlọ ọrụ